U-Hengxing ubambe iqhaza kwi-53th CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
I-Exhibition ngumbukiso omkhulu kunayo yonke eChina, iqoqo lemishini, izinto zokupakisha, imikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu, imikhiqizo yobuhle yobungcweti, ukwakheka, ukunakekelwa kwezempilo nokunye. Imishini yeHengxing ilungiswe ngokucophelela, ngezinga elihle kakhulu lobuchwepheshe, ukusebenza okuphezulu; uchungechunge lwe-ultras ...
Izizathu ezi-5 zokukhetha ukufakwa kweshubhu njengesitsha esifanelekile
Kulezi zinsuku, ukupakisha okwehlukanisiwe kuye kwasetshenziswa kwezimonyo. Futhi ukusetshenziswa kwamashubhu okukhama kukhula kakhulu. Ukuphatheka nokuguquguquka kukwenzile kwaba isitsha esifanele ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene. Kuhle ukusebenzisa konke okudingeka ukwenze ukufaka isembozo ne-squeese, uhambisane nokuqaqa ...
Izinzuzo zokubekwa uphawu kwe-ultrasonic
I-Ultrasonic uhlobo olulodwa lwegagasi lomshini, elenziwe ngohlelo lokuphakelwa kwamandla nohlelo lokudlidliza lwe-ultrasonic. Kungamandla wokuphindisela abuyisanayo wemvamisa ephezulu, amandla aphezulu, akhishwa ngamandla okushayela. Nemingcele ehambisanayo njenge ...